All news - Karajia Resaka Mivantana
10. Ny fampiasana ny group
Raha toa ka te hampiasa solonanarana maromaro ianao dia tsy voatery tehirizina (enregistrer-na) daholo ny solonanarana tsirairay fa azo atao ny mampiasa ny GROUP. Ny tombony dia tsy voatery hanana email… More>>
9. Raha te hanafina host
Mandritra ny 1 volana dia andramana hoe afaka manova host ny tsirairay. Izany hoe manana vhost (virtual host). Mba hahafahana manova io host io dia mila voatahiry ny solonanarana, avy eo manao fangatahana… More>>
8. Fitaovana vaovao: AdiIRC
Misy fitaovana vaovao vao nampidirina indray eto amin'ny site. Ny anarany dia AdiIRC. Azonao atao avy hatrany ny mapiasa azy. Alaina ilay fichier AdiIRC.zip ao amin'ny fitaovana (tsindrio eto) dia… More>>
Manomboka izao dia azo jerena eto amin'ny takelaka ny tahirin'ny resaka mandeha eo an-tokotani-be ao amin'ny karajia. Ny toerana fijerena izany dia http://karajia.org/karajia/archives Mila mampiasa tenimiafina… More>>
6. Najanona ny mibbit
Marina fa anisan'ny fitaovana tsotra azo nampiasaina teto amin'ny karajia ny mibbit kanefa noho ny fanararaotana nataon'ny sasany amin'ny fampiasana azy io dia najanona tsy ho azo ampiasaina intsony izany.… More>>
5. Teny alamina
Nampidirina ao amin'ny lalao indray ny fandaminana teny gasy. Misy litera 8 mifangaro dia alamina. Teny gasy daholo. Ny teny dia nalaina tao amin'ny takelaka tsipelina http://dotmg.net/spell/ izay… More>>
4. Lalao karajia
Misokatra koa izao ny #lalao ao amin'ny karajia. Rehefa tafiditra ianao dia soraty hoe /join #lalao. Raha misy manana fanontaniana sy valiny dia afaka manome izany anay. More>>
3. Mitady ops, helpers sns ny karajia
Manomboka mivelatra ny Karajia na dia vao tsy ampy herinandro aza no nanidina tamin'ny elany manokana (teny gasy re izany loll). Amin'izao dia afaka manokatra efitrano (canal) hafa koa ny mpikarajia fa… More>>
2. Misokatra ny efitrano hafa
Afaka mamorona efitrano hafa ankoatra ny #serasera amin'izay ny eto amin'ny Karajia. Tsy maintsy efa voatahiry ao amin'i Nickserv aloha ny solonanarana vao afaka manokatra efitrano. Hery More>>
1. Nohavaozina ny karajia.org
Araka ny hitantsika dia nohavaozina tanteraka ny karajia.org na ny takelaka izany na ny serveur. Amin'izao dia mampiasa ny lohamilin'ny serasera.org ny karajia. Noho izany raha hiditra hiresaka mivantana… More>>